Yusuf Garaad: Xafladda ama Xabaasha?
Gaalkacyo waxaa deggan intii degganayd dagaalka ka hor oo laga reebay inta xabbadda ku dhimatay. Heshiis ayaa dhacay. Raashin macaan ayaa la wada cunay ayada oo la sheekeysanayo. Sawirro badan ayaa la iska qaaday. Aad ayay madaxda qaarkeed u qososhay sidii in xaflad aroos la joogo.
Yaa ka mas’uul ah dadka la dilay, inta la dhaawacay, dadka barakacay, hantida ma guurtada ah ee la burbiriyay iyo fa’iidada baaqatay ka dib marka ganacsigu hakad galay? Cid is weydiineysa ma arag.
U malayn maayo in aan jawaab i qancisa u helayo su’aalaheyga. Sababta aan u soo qoray waa in ay tusaale u ahaadaan wiilasha qoryaha sida iyo kuwa mustaqbalka qaadi doona meesheey doonaan ha ka joogeen Sabcada. Marka dagaal qabiil loo diro waa in ay kala doortaan Xabaasha iyo Xafladda dagaalka ka dambeyn doonta sida tan ka dhacday Gaalkacyo.
Arrintani waxay na tuseysaa in dhallinyarada dagaallanta ay inta badan isku xaalad yihiin dalka oo dhan. Niman ayaa dagaal geliya aan iyagu dagaalka geli doonin kuna dhiman doonin. Wiilkii ku dhinta qoyskiisa magdhow lama siiyo. Haddii uu xaas iyo carruur ka tagana cid daryeeshaa ma jirto. Xataa marka la heshiinayo magaciisa lama sheego, haddiiba la soo hadal qaado dhammaantood waxaa loogu yeeraa hal magac oo ah "inta" dhimatay".
Xafladda Gaalkacyo waxay xusuusteyda dib u celisay 15 bilood. Waxaan qoray Cinwaanka ah Kala dooro Xafladda iyo Xabaasha. Waxaan markaa ku hal qabsanayay heshiis Kismaayo ka dhacay dagaal dad badan lagu dilay ka dib.
Posted by Yusuf Garaad at 06:45:00
Unknown 6 December 2015 at 06:59
Abdirahman Joseph 6 December 2015 at 07:00
Waa urugo iyo murugo is xanbaarsan. Waa arrin naxdintiisa wata, waa wax aad looga damqado in wiilashii ku dhintay dagaalkaas maanta xaflado xabaalahoodu dushooda lagu qabsado. Wiilashii dhintay guushoodu waxay ahaan lahayd in dagaalku socda ilaa inta qolo laga adkaanayo, heshiisku wiilkii dhintay guushiisa maaha. Haddii la ogyahay in la heshiinayo, maxaa isaga loo dilayay, ee dagaalka loo gelinayay? Allow Alle.
Abdirahman Haykal 6 December 2015 at 07:03
waa nasiib darro dagaal bare laga heshiinayo ninkii naftiisa kuwaaya
Hussein Hassan 6 December 2015 at 07:16
Waxaan jeclaan lahaa nin walba oo qori wato oo dhalinyo ah in uu akhristo qormadaan-waxaa hubaal ah in aad wax badan oo hada kaa khaldan aad ka fahanto THANKS MUDANE YUSSUF GARAAD wax badan ayaad bildhaamisay
abdi Veolia 6 December 2015 at 07:35
abdi Veolia 6 December 2015 at 07:37
abdi Veolia 6 December 2015 at 07:39
Qabiil midkale ka adag majiro. Wada nolaasho wax dhaama na majiran.
Wa tijaabo caalamka oo dhan soo wada marey. Mareykanka cadaan madowga waka adkaan waayey markaasu wada nolaansho uu ogoladey. Jarmalka yahuud wa ciribtiri waayey markaasu wada nolaansho uu ogolaadey. Soomaalia laakin 25 waxay fahmi waayen lamakala adkey halawada Noolaado
Unknown 6 December 2015 at 07:39
wlh waa dhibato sxb lkn laba cadi colaada kaalkacyo joojiya
Muse Khalil 6 December 2015 at 07:42
Qof dhinty sharaf iyo magac helin aakhiro raadkisa an hubin bal dagalamahooow is waydii maxaa ku dagaalanty .......yusuf thnkz sida quruxda badan ee uga hadashay waxa kugu bigaadin lahaa khibradada saxafaded ina dhilinta noqoty dhuxusha odayaaal dano gaar ah wata copocino ku dul caba aaskoda waciyi galin nabaded ayaa ka codsana iyo kuwa sixran ee shababka diin mooday
Abdirahman Adan 6 December 2015 at 07:45
Xaqiiqda ayaad abbaartay Yuusuf. Waxaan rajaynayaa in dhallin badan oo la iska lisayaa, ku tusaale qaataan. Mahadsanid
Mohamed Abdi 6 December 2015 at 07:46
Mudane Yusuf Waxaad ku hadashay ama qortay wixii aan rabay in aan ka hadlo ama qoro waana arin ka guuxaysa dadka dhiig iyo dareen soomaalinimo leh waxaana jira dad badan oo qaba dareenkaas lakiin aan awoodin in ay bulshadda u soo gudbiyaan ayagoon haysan aalad ay wax ku gudbiyaan sidaa daraadeed waan kaaga mahadcelinayaan qormadaada . takale Xafladii shalay waxay muujinaysaa in uu san qiimo ku fadhin dhiiga dhalinta iyo shacabka hantidoodu burburtay lakiin waxaa jirta maalin la isxisaabin doono
ahmed abdi halane 6 December 2015 at 07:51
mudane yusuf garad cumar waan.ku salamay marka.hore wadna.ku mahad san tahay inaad wax walba nagu tusto qoraal si an u fahano.
lkn waxan.ka jeclaa inuu xiabigaaga uu dhigo go,sha nabaded lkn maba eysan dhicon.
waa.dhab wilasha da,da yar ee dhintay waxaa logu yeraa marxum yadii dhintay kuwii harayna hadii wax logu yero waxaa la yiraa amar baan.sinay iney xabada jojiyaan.
marka qoralkan ilama ahan inuu garayo wilasha amarka la siiyey.
waxaana aniga leyahay alaa bad baadiyo wilasha hada soo haray labada dhinacba
Said Abdi Osman 6 December 2015 at 09:22
Waxaad qoraalkaan ku tiri "Meeshay doonaan haka joogeen 'Sabcada' ". Waa maxay Sabcad? Yusufow.
Yusuf Garaad 6 December 2015 at 10:29
Waxaan ula jeedaa map-ka ama khariidadda Soomaaliya oo u eg tirada 7 oo af carabiga ku ah sabca inkasta oo carabiga si kale u qoran tahay.
mohamed abdulle 6 December 2015 at 09:48
U malayn maayo in dhalin yaradu dagaalka in ay xiisaynayaan balse duruufta adag iyo abaabulka colaadeed ee ay ku soo hana qaadeen ayaa ka dhigay kuwa u nugul una dhaga jilcan abaabulada dagaal ee deegaanadooda ka curta.
Waxay ila tahay in aanan qiraal iyo qeylo toona taasi looga hortagi karin balse waxaa muhiim ah wacyi galin iyo fusado noleed oo loo abuuro dhalinta waxay kobcin kartaa garaadkoida sidoo kalana waxay kor u qaadi kartaa difaaca garaad ee ay leeyihiin kaas oo iminka lagu daroogeeyay abaabin qabyaaladaysan.....
Abdirahman Ali 6 December 2015 at 10:25
Wariye yusuf garaad salan sare mudane marka hore waxaan qabaa xalku ma ah in laga hadlo dhibta ka danbeysa dagaalka taas in badan waa ogtahay hadii dagaal dhaco in dad dhimanayo kuwo barakacayaan kuwo dhaawac mayaan marka waxaa ila mudan in aan waqti galino anagoo ka run Sheegeyna cadaalada xageeda mareyna intii suurto gal sababta dagaalka keeneysa taas baa u baahan in la wajaho waqtina la galiyo laakiin inagoo ka soo kala jeedna dhinacyada dagaalamaya xal ma keeni karno mana isku raaci karno aragtida ku aadan xaalada wadanka waxaa laga yaabaa in aan wali hooyadi la guursan kii umada somaliyed cadaalad u horseedi lahaa
Abdisalaam Haamid 6 December 2015 at 13:46
Aad iyo Aad baad u mahadsantahy mudane Yusuf waa fikir aad u wacan waan ka helay waa qormo xaqiiqada ku dhisan waana wax ay caadaysteen dadka dhalinyarada somaliyeed isku laaya in ay muddo ka dib sameeyaan xaflad iyada oo aan lagula xisaabtamin waxa ay geesteena ay iska danaystaan . Mahadsanid
abdiqani jiidhe 6 December 2015 at 13:59
xataa ma xasuusna dadka dhintay,kuwa dhawacmay, kuwa barakacay, iyo ganacsiga lumy. Ninka madaxda ahi ma oga waxay hadal kayaqanan ma arkaysa saan ulahadlay kuwii wankaga qosliyey.. Illaahayow shacbigaga ugargaar naxarislawahan ka qaba madaxdana noo hagaaji. Aamiin
Feisal Mohamud 6 December 2015 at 14:59
Yuusuf garaad waxad kasoo shaqaysay mudo dheer idaacad shisheeye weliba gumeysi samaystay dadkana qayb badan oo kamida way xiiseeyn jiren qabkad u samaysay barnaamijyadii ka bixi jiray, dadkeenu qoraal lagulama hadli karo ee waxay u baahan yihiin nidaamka fadhi ku dirirka oo kale in fariimahaan oo kale lagu gaarsiiyo, weliba laga wacyi geliyo qabyaalada iyo xumaanteeda iyo weliba u adeegida danaha qabyaalada ku salaysan ee lagu soo laayey kumanaan soomaali ah ah uuna u danbeeyey kii Gaalkacyo, sidoo kale waxa lagu bari dadkeena wanaaga walaalnimada iyo midnimada leedahay, mudo ayey u baahan tahay iyo dhaqaalihii lagu abuuri lahaa laguna socodsiin lahaa idaacad ama tv afsoomaali ku baxa oo aan wax kale ka shaqayn sida siyaasadaha is diidan oo kale ee kaliya loo adeegsado dhinacaas qabyaalad la dirirka iyo midnimo jecleysiinta, waa fikir fiican lakin u baahan wax badan waan ogahay oo aan sahlanayn in la hirgeliyo weliba qatar baa lagu gelayaa haddii dhinacaas rag ku tashadan iney ka shaqeeyaan wayo waxa ragaas loo arki doonaa cadowga cadowgeena taasoo samir iyo dhabar adayg u baahan haddii inta kale hirgelinteedu hirgasho.
Maxamed 6 December 2015 at 16:32
Sln sare, Yusuf Garaad.
Maalin dhaway ayaan wxn soo galay maqaaxi Yurub ku taalla oo ay ku kaftamayaan dhallinyaro cuslaatay(50-60 jiryo).
Qabiil ahaan waxay ka koobnaayeen soomaali oo dhan. Waxaa aad u kaftamayay kuwa ka soo jeeday Galkacyo labada dhinac.
Dadkii wuu bislaaday. Aabahay baa aabahaa ka geesisan waa laga gudbay.
Inaan ninna nkn ka adkaynna waa la bartay.
Qabiil ahaan anigu wxn xigaa ku waqooyiga. Wxn ahay Daarood.
Waxay i waydiiyeen fikirkayga. Wxn idhi anigu qabiil ahaan reer Mudug ma ihi, lkn waxaa dhammeeyay Yusuf Garaad oo hadal xigmad leh ka qoray natiijada dagaalka.
Waxay la soo boodeen "muxuu yidhi!".
Wxn idhi wuxuu qoray "Gaalkacyo waxaa ku noolaan doona intii ku noolayd, oo laga jaray inta dagaalka ku dhimata".
Waa la wada aamusay. Nin jawaaba labadii dhinacba waan waayay.
Wxn gartay, in xaqiiqadaasi siday qalbigayga u taabatay markaan akhriyay, ay qalbigooda u taabatay qalbigooda.
Dhiigga wiilasha la isku laynayaa wuxuu khasaare ku yahay xaasaskii, agoontii iyo hooyooyinkii ay ka baxeen.
Lkn waxaa dhiigga wiilashaas sida kaararka doorashooyinka ugu tartama siyaasiin awalba sxb ahaa kadibna hoteello qaali ah ka wada cuna casho/qado macaan.
"Kaararkana"(waa maydadka wiilasha) waxaa lagu ridaa "sanduuqa"(xabaalaha) "doorashada"(dagaalka).
Yusuf Garaad, ha ka daalin ifinta xaqqa.
Anonymous 6 December 2015 at 17:49
Shiine's Blog 6 December 2015 at 18:44
Yuusuf ints garatay halaaga dhalinyara Soomaaliyeed ka haysta dagaalka odey dani lihi geliyo. Dhalintu waa firfircoon yihiin, dhiifoon yihiin, hadana ku dhiiran yihiin dhiilo kasta oo loosoo bandfjigo.Su"aalo kama keenan dhawaaqa odey dhaqan xume sitaadi Soo diray. Haddiise dirirta dantii odeygu ka lahaa la gaaro oo aalaaba ku dhisan magsca haybta in goobaha la sheeg-sheego, laguna hilbo qasho, waxalsga heshiiyey iyo dhiiga lakala qaatay dhalintu qayb Kuma laha. Hadana halaag dhacsy horserd bay ka yihiin. Sida kaliya er loog bixi Karo ama looga hortegi Karo waa sqoonta dhallinta oo la kobciyo, dugsiyo iyo jaamacado waxa ksgu bartas ay tshsy culuin ku dhisan danta ummdda it diinta islaamka laga hirgeliyo dalka oo dhan. Waxaanse tebeyaa in dulaaliinta siyasadda iyo hogaanada dalku taas isoo jeedin amaba aqoonteedii iyo kartideedii ka maqsn tahay.
DINI DINI 6 December 2015 at 21:00
Asc sxb arintu meesha laga radinayo majirto waayo dagaalka waxaa ee disa leh unpp waayo galkacyo waxaa jira 2 mamil oo isdiidan wayna ogyihiin waxaana lagudiray qandaraas lami wado lagu saarayey oo 2 maamil kawada dhaxaysa waxayna lavagta u shubeen halmaamul kiikalana markii meesjisa layimid soowareeji ayuu yiri waana laga diiday kadibna waxa uu isku badalay siyaasad oo qolo istiri tan 7ga faaidaysta xaalka cakiran ee gonolka wayna u soconwayday marka danbiga unpp iskaleh oo haday wax u qaynin lahad dagaal mayimadeen midakale aduunka ninkii dagaal shabgalo maxkamad ayaa looga yeeraa lkn somaliya logama yeero waayo waxaa larabaa in uu siisocdo dagalka sokey marka dhalinyaradana in ay dagaal gasho waxaa ku kalifay shaqo la aan oo xataa qaar ayaa ku fakara hadad dhaawacanto tolka ayaa lavag ku sionaya oo ayaan ku qayishid qaarna waa u bisinis oo lacagta rassasta lagu iibinayo auey wax kalaharaan isku soduuno ragiini canshuurta dalka wax ku bartay ayaa dhalintii idinka yarad ku dhagastay markaas ayey waxay camalka raadoyeen dagaal isqarxis taxriib iwm kolay xaqa alaa uwaliya ee dadka somaliyeed dadka inta ka hartay qabta ilaa dakiina waxay ku dhamadeen waxaan kusheegay dalkiina galaa iska daldalta marka hala cansho dadka iuo dalka hadii damir jiro hadii kale waxaad tihiin dalaalada kuwaas u shaqeeya ee olmihiina siiya lacahtaas waxaad la hesjaan aaqoro iyo aduin wax hayga siinina sxn dhamad
Abdikafi Hassan 6 December 2015 at 21:10
Somalida iyo hawtul hamaga waxay isaga egyihiin inaysan fahmin meesha khatartu ku jirto. Waxay kale oo isaga egyihiin inaysan isku cibro qaadan waxay na kale oo isaga egyihiin caqli xumada. Tusaalena qormada aan akhriney ayaa inoo ku filan...Mahadsanid Yusuf qoraal qiimo leh ayaad noo qortey
cabdiqaadir taani 8 December 2015 at 04:05
Aad baan ugu riyaaqay fikirka ka dambeeya qoraalkan muhiimka ah.